Dhageeyso,,Guddiga ka hortagga cudurka Covid19 ee Puntland oo kulan laqaatey ganacsatada boosaaso iyo garoowe . – Radio Baidoa
Dhageeyso,,Guddiga ka hortagga cudurka Covid19 ee Puntland oo kulan laqaatey ganacsatada boosaaso iyo garoowe .
By Webmaster	 On Apr 4, 2020
Qaar kamid ah gudiga ka hortaga cudurka coronavirus ee putland ayaa waxay magaalada boosaaso kulan kula qaateen ganacsatada maagalada boosaaso iyo garoowe sidii uga qeyb qaadan lahaayeen kahortaga cudurka covid 19.
Gudiga maciishada iyo maaliyada putland ayaa kulanka ay laqaateen ganacsatda boosaaso iyo garoowe waxay kaga wada hadleen arimo badan oo laxiriira qorshaha saadaasha keydka maciishada guutul daruuriga ah .
Gancsatadii kulanka kaqeyb galay ayaa waxay gudiga usoo bandhigeen in keydka quutul daruuriga hada taalo gudaha wadanka ay kufilantahay shacabka reer putland bilaha soo socda.
Wasiir kuxgeenka wasaarada maaliyada iyo wasiirka ganacsiga putland oo goobta kahadalay ayaa shacbka reer putland ugu baaqey inay qaataan talooyinka wasaaradaha caafimaadka si looga hortago faafista cudurka corona virus,
Jupaland oo Amartey in si deg deg ah loo joojiyo dagaal beeleedka kasocda duleedka M/kismaayo.
Dhageeyso,,Xaasaska Askartii u geeriyootay difaaca dalka oo maanta Banaanbax Dhigey.